Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (III) စမ်းသပ်မှု Androidsis
တစ်ဦးပြီးနောက် အပိုင်း y နောက်တစ်စက္ကန့် terminal ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေကမ်းလှမ်းနိုင်သလဲဆိုတာကိုပြောတဲ့နေရာမှာဒီဟာကိုဖော်ပြမယ် တတိယနဲ့နောက်ဆုံးကတော့ဒီ gadget၊ ကြီးမားတဲ့ screen နဲ့ multimedia အလားအလာတွေနဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရသလဲ က Galaxy မိသားစု၏ဤအစ်ကိုကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
မီဒီယာဖွင့်စက်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ၎င်းအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်ပြောဆိုခြင်းဖြင့်စတင်မည် ဂီတကိုကစားနိုင်စွမ်း။ မင်္ဂလာပါ။ la အသံအရည်အသွေးကို အားလုံး configuration ဖြစ်နိုင်ခြေ ဒီညီမျှခြင်းများနှင့်အသံအထူးပြုလုပ်ချက်များသည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးဂီတကိုခံစားနိုင်သည်။ ဗီဒီယိုနှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်တူမှတ်ချက်ပေးပါ။ သင်ထည့်နိုင်သည် သင့်ရဲ့ Galaxy Player ပေါ်ရှိမည်သည့်ရုပ်ရှင် ကြောင်းပြproblemနာမရှိဘဲကမျိုးပွားပါလိမ့်မယ်။ ငါပစ္စည်းနှင့်အတူကြွလာသောကစားသမားနှင့်အတူကြိုးစားခဲ့ကြပြီးတ ဦး တည်းရွေ့လျားပြproblemsနာမရှိပါ 720p HD ရုပ်ရှင် (၅၈ လက်မဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ပုံရသော်လည်း 1080p ကိုကျွန်ုပ်တကယ်မစမ်းသပ်ပါ။ ) ၎င်းသည်လုပ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိသည် ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများမှ flash အကြောင်းအရာများကိုအလွန်ကောင်းစွာဖွင့်နိုင်သည်။ သင်လျှောက်လွှာရှိပါက Android အတွက်စီးရီး သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးစီးရီးကိုမည်သည့်ပြproblemနာမှမရှိဘဲနာရီပေါင်းများစွာကြည့်ရှုနိုင်သည်။
မှတ်ဉာဏ်ကမကောင်းဘူး ဒီဗားရှင်းရှိတယ် 8GB Internal Memory ပါရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေက5ခုထက်ပိုပြီးအခမဲ့ရပါတယ်နှင့် 1Gb နှင့်တစ်နှစ်ခွဲကျော် application များအတွက်။ သင့်မှာမှတ်ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြaနာမရှိပါဘူး။ သင့်မှာ microSD ကို 32Gb အထိထားဖို့ချဲ့တဲ့ slot တစ်ခုရှိတယ်။ တေးဂီတကမင်းကိုနားထောင်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးလို့ငါထင်တယ်။ သင်က၎င်းကို သုံး၍ ရုပ်ရှင်များကို SD ထဲ၌ထည့်ပြီးသင်၏သီချင်းများနှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက် internal ရုပ်ရှင်ကိုထားခဲ့လျှင်ဖြစ်နိုင်သည်။ Gameloft ဂိမ်းနှင့်အခြားပရိုဂရမ်များပြောကြ၊ သူတို့ဒေတာတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ internal SD ကိုသုံးတယ်။ ဒီဒေတာကို microSD သွားနိုင်အောင် applications တွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ငါကကြိုးစားခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရှိသေး၏။
Android ကိုသယ်ဆောင်လာတဲ့ဒီ gadget ရဲ့အားသာချက်ကတော့ဒါ့အပြင် မည်သည့်ပြapplicationနာမျှမရှိဘဲ၎င်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်ရန်စျေးကွက်ထဲတွင်လျှောက်ထားနိုင်သည်သို့မဟုတ် .apk ရှိနိုင်သည်။ ၅ လက်မဖန်သားပြင်အားကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်၊ သင်အကြိုက်ဆုံးသတင်းစာများကို browser မှတစ်ဆင့်ဖတ်နိုင်သည်။ Google Reader ဖြင့် feeds များကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ လက်နှစ်ချောင်းဖြင့် Tweet၊ Gtalk တွင်လျင်မြန်စွာစကားပြောနိုင်သည်။ Android ကသင့်အားကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေအားလုံးသည်ဤ“ သေးငယ်သည့်” ကိရိယာတွင်ရှိသည်။ ။
သူယူဆောင်လာတဲ့ကင်မရာတွေဟာလုံလောက်မှုမရှိဘူး။ ငါပြီးသားကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါ အတန်ငယ်ပိုမိုမြင့်မားအရည်အသွေးမြင့်တဲ့နောက်ဘက်ကင်မရာလွဲချော်ခဲ့သည် (၎င်းတွင် 3.2MPx တစ်ခုပါ ၀ င်သည်) ၎င်းသည် HD တွင်မပါသည့်အပြင်အရည်အသွေးသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဗွီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ပြnoနာမရှိပါ။ ဓာတ်ပုံများသည် resolution ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်ကောင်းသည်။ The ရှေ့ကင်မရာ VGA ဒါကြောင့်အောင်မှကြွလာသောအခါကစားအများကြီးပေးသည် Qik ဗီဒီယိုဖြင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများသို့မဟုတ်သင်အသုံးပြုသောအခြားပရိုဂရမ်တစ်ခုခုနှင့်အတူ။
La ကောင်းမွန်တဲ့ကာတွန်းတွေနဲ့ Interface ကမြန်တယ်။ HTC Sense ၏အစွန်းရောက်မှုကိုမရောက်ရှိပဲအရာအားလုံးမှေးမှိန်သွားပြီးအရာအားလုံးသည်လှုပ်ရှားမှုများကိုဖြစ်စေသည်။ Touchwiz interface ကကောင်းပေမယ့်ကောင်းပါတယ် အတန်ငယ်ဝစ်ဂျက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ချို့တဲ့။ သူက Froyo နဲ့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ Samsung က Gingerbread ကိုမွမ်းမံပေးမလားမသိဘူး။ multimedia ဖိုင်အမျိုးမျိုးကိုရှာပြီး၎င်းတို့ကိုပြခန်းများနှင့်ကစားသမားများအလွယ်တကူရှာနိုင်ရန်စာရင်းပြုစုရန် microSD ကဒ်ကိုပင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
အထူးဖော်ပြချက် Allshare ထိုက်တန်ပါတယ် ငါအရင်ကအကြောင်းပြောခဲ့တယ် ၎င်း၏သက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ သငျသညျသဟဇာတမာလ်တီမီဒီယာကိရိယာများအကြားဖိုင်တွေအမျိုးမျိုး play နှင့်သင်လိုချင်သောနေရာတိုင်းကနေသူတို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဘက်ထရီကကြာရှည်ခံတယ်. ကြံပေးခြင်း ဖုန်းပေါ်မှာကစားရင်းသူခံစားနေရတာကအများကြီးပဲ ၆ နာရီကြာသောဗီဒီယိုကိုမရနိုင်ပါ။ သို့သော်မျက်နှာပြင်၏ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအရွယ်အစားကိုစဉ်းစားကြည့်လျှင် 2500mAh သည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာဆေးထိုးနိုင်သည်။ အမှန်တကယ်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုလွဲချော်သော်လည်း 3G အပြင် XNUMXG ဆက်သွယ်မှုအတွက်အိမ်အပြင်ဘက်ရှိဆက်သွယ်မှုအတွက်မူကုန်ကျစရိတ်ကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။ ငါအံ့သြသွားတယ် ငါသူ့ကို GameloftHD ဂိမ်းများကိုမျက်နှာပြင်တလျှောက်ရွှေ့ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ ငါရှိသည်ဟုပြော NOVA2ကိုဤ Galaxy Player တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး၎င်းသည်မည်သည့်နှောင့်နှေးမှု၊ အဆင်မပြေမှုသို့မဟုတ်သင်မျှော်လင့်ထားနိုင်သည့်ပြproblemနာမျိုးကိုမဆိုဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းသည် Optimus 5X သို့မဟုတ် Sensation ရှိအချိန်ထက် ၅-၁၀ စက္ကန့်ပိုကြာနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သည်။ Samsung က Apps များထည့်သွင်းရန်ကိုယ်ပိုင် application မှတဆင့် Glyder2ကိုပေးသည်။ ဒါဟာ "မှော်" အတောင်ပံတွေရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို accelerometer နဲ့ထိန်းချုပ်တာပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းကချိတ်ဆက်မထားဘူး၊ ဒါပေမယ့်ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ဂရပ်ဖစ်ဝန်းကျင်ကဇာတ်ကောင်တွေပျံသန်းအောင်လုပ်တယ်၊ ဒီ terminal ကိုစျေးကွက်ရှိများစွာသောအခြားများ၏အဆင့်မှာကြောင်းပြသပါ။ Quadrant မှပြန်လာသော benchmar သည် Galaxy S. အထက်တွင်အမြဲရှိနေသည်။ ဗီဒီယိုစမ်းသပ်မှုများတွင်စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးလိုအပ်သူများအတွက် 25fps အောက်သို့ကျဆင်းမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၁၂၀ ရမှတ်အကြောင်းနီးပါးနီးပါးပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အစ်ကိုရရှိသော ၈၅၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (အရွယ်မကြီးပါ) ဒီ MP1120 ကိုမောင်းနှင်တဲ့ ARMv850 မှာ 7GHz သို့သာ "သာ"4core ရှိသော်လည်းစွမ်းအားရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
မင်းအတွက်ငါ့အတွက်သူငယ်ချင်းတွေဝယ်ဖို့အကြံပေးမလား ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ် ၎င်းတို့သည်ကွန်ပျူတာစတိုးဆိုင်အများစုတွင်ယူရို ၂၅၀-၂၈၀ ခန့်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော gadget တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဖုန်းအများစု၏ "သုံးလက်မ" ထက်ကစားရန်ပိုမိုပေးသည်။ စာဖတ်ရန်အဆင်ပြေသည်။ တေးဂီတနှင့်ဗွီဒီယိုများအတွက်သို့မဟုတ်အပန်းဖြေအနားယူရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသောခရီးသွားဖော်။ ၎င်းသည် All-in-one တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏အိတ်ကပ်ထဲ“ သယ်ဆောင်နိုင်” ပြီးဒေတာအခကြေးငွေနှင့်အမြဲတမ်းမရှိဘဲသင်၏အိတ်ကပ်ထဲမှပိုက်ဆံအနည်းငယ်ဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (III) စမ်းသပ်မှု
မေးခွန်းမရှိပါကသင့်တွင် 3G မရှိပါက Google မြေပုံမည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
wifi နဲ့ပဲအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ငါ sigyc အော့ဖ်လိုင်း browser ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဒီ Samsung ကို ၀ ယ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီ၊ ယူရို ၂၂၉ မှာရှာနိုင်ပြီ၊ မိုက်မဲတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်တယ်။ Vodafone ကနေအင်တာနက်အတွက် USB ရှိတယ်၊ microusb နဲ့ USB adapter ဆိုပြီးထင်သလား။ မင်းကအင်တာနက်မှာ repoductor ထဲမှာရနိုင်မလား။ မေးခွန်းကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်ပါ
ငါမေးတာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ... နောက်ဆုံးမှာမင်းကအင်တာနက်ကိုဒီအလယ်အလတ်တန်းကနေဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့တယ်။ အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒါ Pontevedra ပါ
ဒီတစ်ပတ်ပါတီအိမ်နီးချင်းများအိမ်နီးချင်းတစ် ဦး မှကြိုဆိုပါတယ်။
မင်းမှာ twitter ရှိလား။
ငါ့မှာဒီကိရိယာရှိတယ်၊ ဒါကငါ့ကို multitouch နဲ့ပြproblemsနာတချို့ပေးခဲ့တယ်။ တကယ်တော့အတော်လေးကောင်းတယ်၊ အရမ်းမြန်တယ်။ ငါကစားတုန်းကဒီပြproblemနာကြောင့်လူကြီးမင်းဆုံးရှုံးမှုတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်။ autofocus ကိုမယူပေမယ့်သူတို့ဟာအရည်အသွေးကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်နေဆဲပါ
မေးခွန်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်မှာဒီ Mini Tablet ပါ။ Kies မှ 2.3 Gingebread သို့အဆင့်မြှင့်ပြီးပါပြီ။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် nova2ကိုသင်မည်သို့ရရှိကြောင်းသိလိုသည်၊ ကျွန်ုပ်ရှာဖွေ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ် install လုပ်၍ မရပါ၊ ၎င်းသည်သဟဇာတမဟုတ်ပါ။ သင်ကူညီနိုင်သည်။
Danieel yepezz ဟုသူကပြောသည်
ဒါကို ce cream cream သားညှပ်ပေါင်မုန့်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မည်လား ???????
Danieel Yepezz သို့ပြန်သွားပါ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာ Galaxy Wifi 5.0 update ကိုအကြောင်းပါ။ သင် Froyo (၂.၂) မှ Gingerbread (၂.၃) သို့တရားဝင်အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်ကိုမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းကြီးမှာ Ice Cream Sandwich (၄.၀) သို့မွမ်းမံနိုင်သည်။ ငါကနှစ်ထပ် Core များအတွက်သာထွက်လာလိမ့်မည်ဟုဖတ်နေကြပါပြီအချို့နေရာများတွင်က Galaxy S ကိုအဘို့အထွက်ထွက်ကပြောသည်အခြားသူများက SGS II ကိုအဘို့အသွားမသာငါရှင်းလင်းခြင်းမရှိတော့ပါ ... ဒါကြောင့်, နောင်လာမည့်အနာဂတ်တွင် (ယခုအနည်းငယ်မျှသာ) Galaxy S Wifi 2.2 ကို ICS (2.3) သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်လား။
Ricardo Da Silva Graçaကိုပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ samsung galaxy player 50 သည်ကွန်ယက်များကိုအဘယ်ကြောင့်မရှာဖွေနိုင်သနည်း။
ကျွန်တော့် Samsung ကမတုံ့ပြန်ဘူး။
ကျွန်ုပ်တွင် galaxy s 5.0 နှင့်ပြaနာတစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်အလွန်အကျွံသော့ခတ်ပြီးပြန်လည်စတင်သည်။ ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။
ကျွန်ုပ်၌ GALAXY S WIFI 5.0 ကိုပိတ်ထားပြီးအီးမေးလ်နှင့်စကားဝှက်တောင်းပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏ tableaa အကူအညီကိုမည်သို့ပြန်လည်ရယူရမည်ကိုမမှတ်မိပါ။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းတွေကိုမက္ကဆီကိုမှာအမှားတစ်ခုဝယ်ခဲ့တယ်။ ပီဆို ၄၀၀၀ ထက်မကဒေါ်လာ ၄၀၀ တန်တယ်။ အဲဒါကငါ့ဘဝမှာအဆိုးရွားဆုံးအမှားပဲဆိုတာငါသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ guinea ဝက်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းတို့သည် Oblivion တွင်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဘာမှမဆိုင်သောကြောင့်စျေးကွက်မှထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပစ္စည်းများကို Samsung က ၀ ယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်ငါနောက်ဆုံးကောက်ရိုးကိုချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွင် ငါမက္ကဆီကန်မဟုတ်၊ မက္ကဆီကိုတွင်နေထိုင်သည်
Shop4Apps: Motorola ရဲ့ Android app စတိုးကိုလက်တင်အမေရိကတွင်ပိတ်ထားသည်